महिला लेखकहरूबाट २ quot उद्धरण | वर्तमान साहित्य
महिला लेखकहरूबाट २ quot उद्धरण
यस हप्ता म केही प्रतिरोधात्मक छु, यो हुन सक्छ। हिजो मैले तपाईंलाई एउटा लेख प्रस्तुत गरें जसमा मैले तपाईंलाई "सम्झना" गरें Poems कविता महिला द्वारा लेखिएको र आज मैले प्रस्तुत गरेको लेखमा म तपाईलाइ केहि भन्दा बढि केही पनि ल्याउन सक्दिन महिला लेखकहरूबाट २ quot उद्धरण। तिनीहरुको बिचमा, सिमोन डे बाउवोइर y भर्जिनिया वूलफ, यस शाब्दिक मा मेरो मनपर्ने को दुई।
म आशा गर्दछु तपाईंले उनीहरूलाई रमाईलो गर्नुभयो! उनीहरू के कुरा गर्दैछन्? सबै कुराको एक बिट: जीवन, प्रेम, धर्म, बच्चाहरू, आदि ...
"उपस्थितिमा वास्तविकताको पूर्णता छ, तर केवल उपस्थितिको रूपमा। उपस्थिति बाहेक केहि अरूको रूपमा, यो त्रुटि हो »। (सिमोन वेइल)
"महिलाले यस शताब्दीभरि ऐनाको रूपमा सेवा गरेका छन जुन जीवनको दुई गुणा आकारको मान्छे को आकृति प्रतिबिम्बित गर्न सक्ने शक्तिमा छ।" (भर्जिनिया वूलफ)
"मैले जे देखेको छु, त्यसमा म कपडा लगाउँछु, म आफैलाई ओढ्ने गर्छु र म आफूलाई समर्थन गर्छु, मलाई जे छ त्यो मसँग छैन।" (ग्लोरिया फुअर्ट्स)
"त्यहाँ एक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक रहेको तथ्यले उनीहरूका बाँकी साथीहरूले बस्ने भेदभावको स्थितिलाई क्षतिपूर्ति वा बहाना गर्दैन।" (सिमोन डे बाउवोयर)।
"कुनै पनि शिक्षा आफैंबाट बेकम्मा हुन्छ, तर झूटा शिक्षाद्वारा धोकामा नपर्न केवल यो हुनु आवश्यक छ।" (सिमोन वेइल)
«म धेरै सहनशील छु। म नैतिकता होइन। मसँग जीवनको बृद्धि र अरूलाई सेन्सर गर्ने प्रलोभनहरूको पनि भावना छ। जे होस्, मँ तपाईको सोच्न को रूप मा अनावश्यक छैन, मलाई न्याय, तपाईं मेरो न्याय को लागी, मेरो लचकता को लागी। (भर्जिनिया वूलफ)
"म यो आउन चाहान्छु, तर म तपाईको आवाजको नजिक जान चाहन्न र जल्दिन।" (ग्लोरिया फुअर्ट्स)
"छालाको झुराहरू आत्माबाट आउने त्यो अवर्णनीय चीज हो।" (सिमोन डे बाउवोयर)।
"केटाकेटीलाई केहि आवश्यक चीजहरू कसैले सिकाउँदैन, जस्तो कि चुहाउने नल ठीक गर्नु, अधिकारीलाई घूस दिनु वा कुकुरको कपाल काट्नु।" (इसाबेल एलेन्डे)
"मैले सँधै विश्वास गरेको छु र विश्वास गर्दछु, त्यो कल्पनाशक्ति र कल्पना धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि ती हाम्रो जीवनको वास्तविकताको अविभाज्य अंग हुन्।" (Ana María Matute)
र तपाईं चाहानुहुन्थ्यो कि तपाईं कवि हुनुभयो; र तपाइँ चाहानुहुन्छ कि तपाइँ एक प्रेमी हुनुहुन्छ। (भर्जिनिया वूलफ)
"बायाँले गरेको कुरालाई वेवास्ता गर्न तपाईंको दाहिने हातका लागि, यो चेतनाबाट लुकाउनुपर्नेछ।" (सिमोन वेइल)
«अब जहिले पनि एक शैक्षिक अन्तरमा जहाज दुर्घटनाग्रस्त छ। जब तपाइँ ट्याक्सीमा जानुहुन्छ तपाई आश्चर्यचकित हुनुभयो कि नरक किन उनीहरूले तपाईलाई पहिलो कक्षाबाट सिट्टी बजाउन सिकाएनन्। वा भाँडा डिग्रीजेस गर्न, अड्केको लिफ्टबाट बाहिर निस्कनुहोस्, रबर परिवर्तन गर्नुहोस् वा एउटा फारम भर्नुहोस् »। (इसाबेल एलेन्डे)
"हामीले कल्पना गरेका कुरा पनि वास्तविकताको अंश हो।" (रोजा मोन्तेरो)
"लेखन सधैं विरोध गर्दछ, यो आफैबाट हो भने पनि।" (Ana María Matute)
«कविहरू, हामी समय खेर फाल्दैनौं, काम गरौं, त्यो सानो रगत मुटुसम्म पुग्छ» (ग्लोरिया फुअर्ट्स)
"हाम्रो भाग्य एक रहस्य हो र सायद जीवनको अर्थ भनेको अर्थको खोजी बाहेक अरू केही होइन।" (रोजा मोन्तेरो)
"चरम दुःख जुन मानिसलाई आउँछ, त्यसले मानव दु: ख सिर्जना गर्दैन, यसले यसलाई सरलतासाथ उजागर गर्दछ।" (सिमोन वेइल)
“पुरुषहरू देशको आन्दोलनको बारेमा इमान्दारी र जोशपूर्वक लेख्नमा गर्व गर्न सक्दछन्; उनीहरूले सोच्दछन् कि युद्ध र ईश्वरको खोजी केवल महान साहित्यको विषयवस्तु हो; तर यदि संसारमा पुरूषहरुको स्थिति एक राम्रो छनौट टोपी द्वारा stagged थिए भने, अंग्रेजी साहित्य नाटकीय परिवर्तन हुनेछ। ' (भर्जिनिया वूलफ)
समयले सबै कुरा ठीक गर्दछ, तर यसले सबै चीजहरू जलाउँदछ। राम्रो र नराम्रो। यो तपाइँको मेमोरी चीजहरूबाट चीरहन्छ जुन तपाइँ त्यहाँ राख्न चाहानुहुन्छ। समयले यसलाई टाढा लैजान्छ। (Ana María Matute)
"राम्रो लेखकले कुनै पनि कुरा लेख्न सक्छ र कुनै पनि विषयमा साहित्य लेख्न सक्छ, र नराम्रो लेखकसँग त्यो क्षमता हुँदैन।" (अल्मुडेना ग्रान्ड्स)।
"कसले भने कि अस्वाभाविक रमणीय छ? दु: खको त्यो मुखौटा उतार्नुहोस्, त्यहाँ सधैं गीत गाउने कारण छ, सबैभन्दा पवित्र रहस्यको प्रशंसा गर्नलाई, भ्यागुता नहोऊन्, हामी जो कोही पनि छ भन्नको लागि दौडौं, त्यहाँ हामी जहिले पनि प्रेम गर्छौं र हामीलाई माया गर्छौं »। (ग्लोरिया फुअर्ट्स)
"यो संस्कृति उल्ल .्घन गर्न कानुनी हो, तर यसलाई बच्चा बनाउने सर्तको साथ।" (सिमोन डे बाउवोयर)।
"उनले भने कि प्रायः सबै अन्धविश्वासजस्तै इसाई धर्मले मानिसलाई कमजोर बनायो र बढी राजीनामा दियो र स्वर्गमा इनामको आशा गर्नु हुँदैन, तर पृथ्वीमा आफ्नो अधिकारको लागि संघर्ष गर्नुपर्दछ।" (इसाबेल एलेन्डे)
"व्युत्पत्ति र अश्‍लीलताबीचको भिन्नता, व्युत्पत्तिकता बाहेक, सन्देश ग्रहण गर्नेको दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित छ, यो पाठकको मनोवृत्तिसँग सम्बन्धित छ।" (अल्मुडेना ग्रान्ड्स)।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » महिला लेखकहरूबाट २ quot उद्धरण
रिकार्डो "बिचिनो" क्विन्टाना भन्यो
सुन्दर ... यस्तो देखिन्छ कि मैले यसलाई मेरो पृष्ठमा लगें ... ठूलो अंगालो ... लामो समय भयो मैले तपाईंलाई भेट्न आएको हुँ।
रिकार्डो (बिचिनो क्विन्टाना कलाकार)
रिकार्डो "बिचिनो" Quintana लाई जवाफ दिनुहोस्